၂၀၀၄ ခု နှစ်က ရုက္ခ ဗေဒ ဘာသာ ရပ် ၊ ဂျပန်ဘာ သာ YFL . Business Law YGN . ပြီးခဲ့ ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မှာ ဂျပန်သို့ သွားရောက် ခဲ့ ပြီး Auto printing Design ကို အဓိက ထား သင်ယူလေ့ လာ ခဲ့ ကာ ၂၀၁၀ မှာ မြန်မာ ပြည်သိူ့ ပြန် ရောက် ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ ၈လပိုင်း မှာ ကားအငှား လုပ်ငန်းကို စတင်ထူထောင် လုပ်ကိုင် ခဲ့ ပြီး ၂၀၁၁ ခု နှစ် မြေ အရောင်းအ၀ယ် ပြု လုပ် ခဲ့ ပါသည်။ ခြံ မြေ တွေ မှာ Investment လုပ် ရင်း ၊ ၂၀၁၇ ခု နှစ် တွင် အိမ်ခြံ မြေ အကျိုးဆောင် လုပ် ငန်း ကို တစိုက် မတ်မတ် လုပ် ကိုင် ခဲ့ပါ သည်။
Minami Kankoo Co., Ltd (MKK Car Rental Service/Swan HtetKyaw Car Rental Serviceနှင့် MKKRealestate) သည်အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများလက်အောက်ရှိသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏လမ်းညွှန်မှုများအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးမှန်ကန်တိကျသောနည်းလမ်းဖြင့်သာအောင်မြင်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
MKK Business Group Managing Director